Snowflake wuxuu sharaxayaa sida ay ugu badaleen iibintooda suuq geyn Account-based #CONEX | Martech Zone
Monday, August 20, 2018 Talaado, Agoosto 21, 2018 Douglas Karr
Waxaan joogaa Toronto anigoo xaadiraya Shirka Khibradda Mawduuca Uberflip. Maanta, waxaan maalin ku qaadnaa xarunta Uberflip xarunteeda quruxda badan waxaanan dhageysanay qaar ka mid ah hadalladii waaweynaa. Hal kulan oo saameyn igu yeeshay aniga ayaa ahaa Snowflake's Agaasimaha ABM, Daniel G. Maalin, Isagoo ka hadlaya sida uu u soo saaray barnaamij ABM ah oo cirka isku shareeray natiijooyinka iibka Snowflake.
@uberfliphq qaybta qulqulka #CONEX waa boodaysaa! HQ qurux badan halkan #Toronto #torontotech
Fariin ay wadaagaan Douglas Karr (@dknewmedia) on Aug 20, 2018 at 2: 26pm PDT
Guud ahaan, Snowflake wuxuu lahaa koritaan 10x ah. Daanyeel wuxuu hubiyay inuu ku daro in tani aysan ahayn dhammaan natiijooyinka suuqgeynta ku saleysan xisaabta, laakiin waxay yeelatay saameyn baaxad leh. Daniel wuxuu kaloo xusay in farqiga u dhexeeya bartilmaameedka istiraatiijiyadeed ee iskuulka ee iibka ABM uu dhamaantood ku jiray kartida miisaanka iyada oo leh ilo yar iyo adeegsi wax ku ool ah oo tiknoolajiyadeed. Shirkaddu waxay ka bislaatay inay diiradda saarto jaranjarada, si ay u adeegsato sahaminta farsamooyinka si loo bartilmaameedsado noocyada ganacsiyada qaarkood, iyadoo hadda la siinayo waayo-aragnimo nuxur ahaan u habboon oo hal-ilaa-hal ah si loo soo jiito xisaabaadka la bartilmaameedsaday.
Habka ABM ee Snowflake geeyo:
Target - adeegsiga Everstring iyo Bombora, Snowflake ma ahan xulashada gacanta shirkadaha bartilmaameedka… waxay soo ogaaneysaa ganacsiyo u dhigma macaamiishooda ugu fiican waxayna muujiyeen ujeedo ah inay iibsadaan.
gaaraan - adeegsiga terminus, Sigstr, Iyo LinkedIn, Snowflake waxay uruurineysaa waaya-aragnimo shakhsiyeed oo shakhsiyadeed oo taabanaya iibsadayaasha mustaqbalka ka hor inta aysan xitaa ka warqabin xalkooda. Xaqiiqdii, Daanyeel wuxuu sheegay inay haysteen hal macmiil oo lahaa 450 taabtay ka hor macmiilku waligiis codsi buu gudbiyay!
Ka qaybgal - adeegsiga Uberflip, Snowflake waxay leedahay waaya-aragnimo maadadeed oo ah leedahay by maareeyaha koontada iibka, laakiin ay soo saartay kooxda ABM si ay u bixiso nuxur aad u sarreysa oo lagu bartilmaameedsanayo iibsadaha safarka macaamiisha.
Cabbiraad - adeegsiga Engagio, yaase, Iyo Fiiri, Daniel wuxuu soosaaray hanaan lahaansho oo ah hogaaminta dhibcaha iyo bixinta sirdoonka iibka ee looga baahan yahay maareeyayaasha xisaabaadka iibka si ay uga caawiyaan xidhitaanka heshiiska.
Natiijooyinka waa kuwo qurux badan. Qiimaha gujinaya illaa iku kordhay 149X 1: 1 xayeysiiska ABM. Intaas oo keliya maahan, kalabar dhammaan waxyaabaha in soosaarka Snowflake ay cunaan ururo bartilmaameedsaday ABM.
Mid ka mid ah furaha uu ku celceliyay Daniel in ka badan iyo in ka badan ayaa ahaa in xiriirka ka dhexeeya iibka iyo suuqgeyntu ay gabi ahaanba muhiim tahay. Teknoolojiyadda ayaa ka caawisay Daniel inuu dedejiyo hawsha hawlgelinta ee ku saabsan waxyaabaha la bartilmaameedsaday, laakiin kooxdiisu wali waxay u baahan tahay inay ka shaqeyso fursadaha ugu fiican.
Taasi waxay u baahan tahay iibin si loo bixiyo jawaab celin iyo sidoo kale in lagu quudiyo sirdoonka. Kooxda Daanyeel waxaa loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan sidii loo wadi lahaa fursadaha iibka ee iibka, iyada oo aan la soo saarin xisaabinta MQL (Suuqgeynta U-qalanta Suuqgeynta).
Wow, taasi waxay ahayd uun shirkii ka horreeyay! Ma sugi karo berri.
Tags: abmsuuq geynta xisaabtabomboraengagiowarbaxinLinkedIneegshakhsi ahaaneedsigstrSnowflakemiiskawaayo-aragnimo ku habboonbartilmaameedkajoojintauberflip